सम्झौता अनुगमनमा निर्भर | चितवन पोष्ट
17 11 19, Sunday
सम्झौता अनुगमनमा निर्भर
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवले मन्त्रीसँग र विभागीय प्रमुखले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । कार्यसम्पादन सम्झौताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ इतिहास रचेको मात्र छैन कि नयाँ सम्भावनाको द्वार पनि खोलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिमण्डल गठन गरेको झन्डै डेढ वर्ष गुज्रँदासमेत मन्त्रालयले ठोस योजनासहित कुनै त्यस्तो अपेक्षित कार्य सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई केहीले अतिरञ्जितरुपमा व्याख्या गरे पनि यसको सान्दर्भिकतालाई अनुपयुक्त मान्न सकिन्न ।
हुन त, यो सरकारले कामै नगरी बसेको भन्ने आरोपमा दम छैन भन्न सकिन्न । तथापि, सरकारले आफूले देशको बाग्डोर सम्हालिरहँदाको अस्तव्यस्त स्थितिका बाबजुद पनि भारत (मोतीहारी) नेपाल (अमलेखगञ्ज) पाइपलाइन बिच्छ्याउने ३० महिने कार्यक्रम पनि १७ महिनामै समाप्त गरी त्यसको परीक्षण पनि सम्पन्न गरिसक्नु, भूपरिवेष्टित मुलुकलाई संसारसँग जोडिएको मुलुकमा परिणत हुनु, पूर्वपश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार हुनु, चाइना नेपाल तथा भारत–नेपाल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आरम्भ हुनु, तुइनको सट्टा झन्डै चार सयजति झोलुंगे पुलहरु राखिसक्नु, माथिल्लो त्रिशूली ए जलविद्युत् आयोजना पूर्ण हुनु, इन्धन अन्वेषणका कार्य आरम्भ हुनु, नारायणी नदीमा आगामी दसैँपूर्व नै पानीजहाज चल्ने स्थिति सृजना गर्नु, राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन निर्माण, सांसद् आवास गृह निर्माण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम, विभिन्न मुलुकका सरकारसँग सरकारको श्रम सम्झौता हुनु, स्याउ, तरकारी आदि खेतीमा पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्नु, भूमाफियाहरुबाट तस्करी गरिएका जग्गाको अनुसन्धान गरी फिर्ता ल्याउने कार्य आरम्भ हुनु, काठमाडौँ–केरूङ रेल्वेको डीपीआर तयार हुनु, प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नु, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु, काठमाडौँमा मनोरेलका निम्ति डीपीआरका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता हुनु, कर्मचारी समायोजनको काम सकिनु, विराटनगरस्थित भारतीय कन्सुलरको कार्यालय हटाउनु, १९५० सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गर्ने कार्य अघि बढ्नु, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् बंगलादेशमा बिक्री हुन थाल्नु र भारतको लगानीमा उत्पादित विद्युत् मात्र खरिद गर्ने अडानबाट पछि हट्न भारतलाई सहमत गराउनु, बन्दको अवस्थामा रहेको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना खुलाई नाफामा सञ्चालन गराउनु जस्ता धेरै कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
हो, यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने, मोटरसाइकलदेखि गाडी सुविधा उपलब्ध गराउनेजस्ता गैरराजनीतिक निर्णयलाई यो सरकारले खारेज गर्नुपथ्र्यो, तर गर्न सकेन । बरू, यसलाई अझ बढवा दियो । अझ, गण्डकी प्रदेश सरकारले त गापा र नपाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई पनि गाडी सुविधा दिनेजस्ता निर्णय गरिँदा चरम बेथिति पैदा भए । यहाँसम्म कि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकले नियुक्ति लिन जाँदा कर्मचारीलाई समेत खाजाखर्च दिनुपर्ने भएको भन्दै गुनासा आएका छन् । प्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले अनुगमन र निरीक्षणका नाउँमा अनियमितता गरिरहेको समाचार सम्प्रेषित भइरहेका छन् । अख्तियारलाई सक्रिय गराउँदागराउँदै पनि भ्रष्टाचारले उत्कर्ष रुप लिएको स्थिति छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार अझ जिम्मेवार बनी प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
हामीभित्रै छ : गुण र अवगुण !
सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम : अनुलोम विलोम
संस्कृतमा घुराक्षर न्याय भन्ने कथन चलनमा छ । धमिराले बनाएको रेखाचित्रसँग यो सम्बन्धित छ । लामो समयसम्म किताबकपीहरु चिसो ठाउँमा रहिरहे त्यसमा धमिरा लाग्छ । भित्र पल्टाएर हेर्दा मानौँ उसले त्यहाँ राम्रा–राम्रा चित्रहरु बनाएको हो कि झैँ लाग्दछ । तर, त्यो योजनाबद्धरुपमा नभई उसले हिँड्दा र खाँदा बन्न गएको रेखा हो । झट्ट हेर्दा त्यो चित्रजस्तो प्रतीत हुन्छ । त्यो देखेर हामी सानो छँदा मसीको डिब्बामा धागो चोबेर नलेखेको पानामा राखी कुनै अर्को कपीले छोपेर धागो स्वार्र तान्थ्यौँ र हेथ्र्यौं, पछि त्यहाँ सुन्दर अमूर्त चित्र बनेको हुन्थ्यो । त्यो हेरेर हामी मक्ख पर्दै अरुलाई देखाउँथ्यौँ । साँच्चै त्यहाँ एउटा सुन्दर अमूर्त चित्र बनेको हुन्थ्यो ।
हो, आज सोच्छु हामीले बनाएका विकास निर्माणका प्रायः भौतिक संरचनाहरु त्यस्तै प्रकृतिका देखिन्छन् । चाहे त्यो विद्यालय होस्, महाविद्यालय होस् वा अन्य कुनै कार्यालय । सडक, मन्दिर, पुलपुलेसा र कैयौँ संरचनाहरु घुराक्षर न्यायअनुरुप नै बनाएका भेट्छौँ । ‘गर्दै जाँदा जे भयो भयो’मै सीमित छन् हाम्रा कार्यहरु । यसैले पनि प्रायः संरचनाहरु अस्तव्यस्त प्रकृतिका छन् भन्दा अन्याय हुँदैन भन्ने लाग्छ । पहिले हामीसँग पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान पनि थिएन । हामीसँग त्यस्तो दीर्घकालीन सोच पनि भएन सायद । वर्तमानलाई पुगे भइहाल्यो नि पछि देखा जाला भन्ने सोच बन्यो होला । त्यसबेला हामीसँग पर्याप्त बजेट पनि थिएन । नहुनु मामाभन्दा त बरू कानो मामा नै निको भन्ने सोच आज त छ भने हिजो थिएन भन्ने कुरा आउँदैन । थोरैमा चित्त बुझाउने भनौँ या जेजति छ त्यसैमा चित्त बुझाएर त्यसैभित्र रहेर आप्mनो व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो परम्परागत मनोभावनाका कारण पनि यस्ता अल्पकालीन कार्यहरु भए ।
यही स्थिति हिजोसम्म थियो र अझै पनि कतिपय सन्दर्भमा छ । त्यो सरकारले गर्ने विकासका कामहरुमा पनि देखिने गरेको छ । त्यसो त, योजना बनाएर थालिएका कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि समयमा नसिद्धिएर कचल्टिएर बसेका छन् । अझ काठमाडौँका ढल, खानेपानी, विद्युतीकरण र सडक तथा त्यहाँ हुँदै गरेका निर्माणकार्यलाई हेर्ने हो भने त ‘यो घुराक्षर न्यायकै परिणति हो’ कसले नभन्ला र ? तर, त्यहीँ हेर्ने हो भने अहिले बन्दै गरेका साँखु जाने सडक, मूलपानीतिर जाने सडक, रिङ्रोडका सडक, मोफसलका भैरहवा–बुटवल सडकखण्ड, अब बन्ने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डहरु गौरव गर्न लायक लाग्छन् ।
यसअघि बनेका केही सरकारले केही नयाँ दृष्टिकोण र व्यवहारको झल्को दिन खोजे पनि त्यसलाई पछि आएकाले अनुसरण गरेनन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले कसैले गर्न नसकेको काम काठमाडौँका साँघुरा गल्लीहरुलाई फराकिलो सडकमा परिणत गरिदिए । त्यसबेला उनी राजधानीवासीको कोपभाजन हुनुपरे पनि आप्mनो अडानबाट थोरै पनि टसमस भएनन् । यसैले उनले महादेवले झैँ विरोध र अपमानरुपी हलाहल विषपान गर्नुपरेको थियो । उनैले सस्तो रकममा खरिद गर्न सकिने मुस्ताङ म्याक्स चढे र पूरै आप्mनो कार्यकाल पूरा गरे । उनले जनताको सुखदुःख बुभ्mन महिना–दुई महिनाका अन्तरालमा गरिब जनताका घरमा गएर बस्ने कार्य आरम्भ गरे । तर, उनी जम्बो टिमसहित जानाले भड्किलो मात्र भएन राजकीय शैलीको भयो भनेर आलोचित बने । राम्रो र स्तुत्य कदम हुँदाहुँदै पनि यो कार्य अलिक आलोचित बन्न पुग्यो । जनताको गुनासो सुन्नकै लागि उनले हेल्लो सरकार कार्यक्रम पनि ल्याए जुन कार्यक्रमले धेरै सकारात्मक प्रभाव दियो ।
यसपछिका प्रधानमन्त्रीले उनको सिको गरेनन्, बरू करोडौँको गाडी किने र त्यसैमा सवार भए । त्यसपछिका सरकारहरु झन् फजुल खर्च गर्नमा उत्ताउलो शैलीमा प्रस्तुत भइरहे । देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने अनि स्वयं विलासितालाई लाजमर्दो हुने गरी उत्कर्ष चुम्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरह्यो । उनीअघिका र पछिका नेतागणले राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो सम्झे । प्रधानमन्त्री पद भनेको आप्mना नातागोता र साथीभाइका अघि शान, मान र पोज देखाउने दरिलो हतियार ठाने । हुनुपथ्र्यो राजनीति विशुद्ध देशको सेवा गर्ने क्षेत्र । तर, त्यो हुन नसक्दा नै राजनीति राजतन्त्र, राणातन्त्र, पञ्चायती तन्त्र र प्रजातन्त्रहरु मात्र नभई स्वयं गणतन्त्र पनि विकृत बन्न पुग्यो । यसैले, सबै तन्त्र फ्लप भइरहेछ । तन्त्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन ।
तर, यहीँ अहिले पहाडतिर जानका निम्ति खोलिँदै गरेका ट्रयाक र भौगर्भिक अध्ययन नै नगरी एक्साभेटर लगाएर जथाभावी खोलिएका ट्रयाकहरु मन नै अमिल्याउने खालका छन् । हुन त, अहिले दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार भएर पनि यसले विसंगति अन्त्य गर्ने दिशामा एक कदम अघि बढेर प्रगतिशील कार्य गर्न सकेको देखिएन । हो, ओली सरकारले पनि कार्ययोजनाविहीन ढंगमा प्रस्तुत हुँदा धेरै राम्रा विषय उठाउँदाउठाउँदै पनि त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्न अल्मलिँदा निकै आलोचित बन्न पुगेको छ, जस्तैः सिन्डिकेट, सुनकाण्ड, गुठी विधेयक, विषादीयुक्त तरकारी आयातमा प्रतिबन्ध आदि । यसैले सरकार निर्माण भई कार्य गरिरहेको झन्डै डेढ वर्ष बितिरहँदा कुहिराको काग बन्न गएको आभास भइरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा ठोस कार्ययोजना ल्याएको छ, जुन सराहनीय र स्तुत्य पनि छ ।
कम्तीमा मन्त्रालयले वर्षभरिका सम्पादन गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित भई काम गर्न यसले दबाब सिर्जना गर्ने प्रचुर सम्भावना देखाएको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, मन्त्रालयहरु एक वर्षका लागि जागिर सुरक्षित भएको भन्दै चयनको निद्रामा लीन रहने पनि उत्तिकै सम्भावना छ । जहाँ यस्ता सम्झौता भए र बीचबीचमा कार्य प्रगति केकति भइरहेको छ भनेर कार्यस्थलको अनुगमन गर्ने, त्यसको मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक परामर्श तथा निर्देशन दिइएका संस्थामा अपेक्षित कार्यप्रगति देख्न पाइएको छ ।
यसर्थ, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग र सचिवले मन्त्रीसँग र विभागीय प्रमुखहरुले सचिवसँग गरिएको यो श्रम सम्झौताले निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन भएको स्थितिमा अझ प्रत्यक्षरुपमा देखिने र अनुभूति गरिने गरी कार्यप्रगति हुने आशा र अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।